Omenala ndị Germany | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Alemania, omenala
Alemania dị n'etiti Europe na mgbe Russia bụ mba nwere ya ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị bi na kọntinent ahụ, ebe nde mmadụ 83 bi na steeti iri na isii ya. Ọ bụ n'ezie akụkọ ihe mere eme nke Phoenix n'ihi na obi abụọ adịghị ya na mgbe agha ahụ na nkewa nke mba ahụ ji nnukwu ebube mụọ ya.
Ma kedu ka omenala ndị Germany dị? Ọ bụ eziokwu na ha bụ ndị na -eme ihe n'usoro ma na -agbasi mbọ ike? Enwere ebe maka ịkpa ọchị dị mma na ime enyi ma ọ bụ na ọ bụghị? Edemede taa na Actualidad Viajes bụ maka ọdịbendị Germany.
2 Omenala nke Germany
Akụkọ ihe mere eme nke obodo a dị ogologo ma ọ na -esonye na ihe omume Europe kachasị mkpa mgbe niile, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Maka ọtụtụ, Otú ọ dị, Germany na -abanye n'akụkọ ihe mere eme Ọchịchị Nazi na 1933, gọọmentị na -eburu ya na Agha Ụwa nke Abụọ na ịbụ onye na -emezu otu n'ime ọdachi kachasị dị egwu nke mmepeanya mmadụ, Oké Mgbukpọ.
Ka oge na -aga, mgbe agha ahụ gasịrị, nkewa nke ókèala dị n'etiti German Federal Republic na German Democratic Republic, akụkụ ikeketeorie na akụkụ ọchịchị Kọmunist n'okpuru ọchịchị Soviet. Yabụ na ndụ ya ga -agafe ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe nke narị afọ nke 40, mgbe anyị, ndị karịrị afọ XNUMX, hụrụ na TV Ọdịda nke Mgbidi Berlin na mmalite nke oge ọhụrụ.
Taa Germany guzoro dịka ike akụ na ụba ụwa, onye ndu ụlọ ọrụ na teknụzụ, yana ezigbo usoro ahụike ụwa niile, agụmakwụkwọ ọha n'efu na ezigbo ibi ndụ.
Na Germany enwere otu ọtụtụ okpukperechi, omenala na omenala ngwaahịa mbata na ọpụpụ, mana n'agbanyeghị nke a, na akụnụba a, enwere ụfọdụ agbanwe agbanwe nke enwere ike ịhụ na omume German.
Germany bụ ala ndị na -eche echiche, ndị ọkà ihe ọmụma na ndị ọchụnta ego. Dị ka nnukwu denominator, enwere ike ikwu ya n'atụghị egwu nke njehie ndị Germany nwere ezi uche na ezi uche na nke ahụ, kwa a haziri ha n'usoro. N'echiche a, isi ihe mmadụ nwere ike ịkpọ bụ puntuality.
Dị ka ndị Japan, Ndị Germany bụ ndị na -abịa n'oge nke ahụ na -emekwa ka ihe niile dị mkpa ịrụ ọrụ n'oge iji mee ya. Ana m ekwu maka njem ma ọ bụ nlekọta na ụlọ ọha. A na -eso usoro wee mee nke a na -ahụ nsonaazụ kacha mma. Ụgbọ oloko anọghị ebe a, bọs ma ọ bụ ụgbọ elu anaghị anọ ọdụ, elekere na -arụkwa ọrụ nke ọma. A na -agbaso atụmatụ a n'akwụkwọ ozi, na -eso motto nke gụrụ ihe dịka "ịbịa n'oge bụ obiọma ndị eze."
Yabụ, ọ bụrụ na ị ga -eso onye German na -emekọrịta ihe, ọ ga -aka mma ka ị na -abịa n'oge ma na -akwanyere usoro ịtọlite. Ọbụlagodi iwu akwadoghị ekwupụta na ọ ka mma ịbịarute nkeji ise tupu oge a kara aka karịa otu nkeji gafee oge.
N'aka nke ọzọ, n'agbanyeghị na ndị Germany nwere aha oyi echiche nke ezinụlọ na obodo gbanyesiri mkpọrọgwụ ike. Ndị obodo na -agbaso iwu ma yabụ enweghị nsogbu nke ibikọ ọnụ ma ọ bụ na agbataobi, obodo, obodo ma ọ bụ obodo niile. Emebela iwu ka a ga -eso.
La okike ndi nwoke ọ bụ ihe echere na ịtụle. N'ezie, na nso nso a Chancellor Merkel n'onwe ya kwupụtara onwe ya, mgbe ọ gbachiri nkịtị nwa oge, nwanyị. Obodo a na -akwanyere ikike obodo dị LGBT na obere oge ugbu a iwu mbata na ọpụpụ.
N'ụzọ doro anya, ọ nweghị ihe dị mfe, enwere ndị otu aka nri na ọha German nke na-enweghị mmasị na multiethnic mana n'oge a n'ụwa ... ọ nwere ezi uche ikwu maka ịdị ọcha na ihe ndị ahụ? E wezụga ịbụ onye nzuzu. 75% nke ndị Germany bụ obodo mepere emepe ọ bụkwa ebe a ka ndị mmadụ na -emesapụ aka ma na -emepe emepe n'ihe ndị a.
Ruo oge ụfọdụ ugbu a, Germany na -echegbu onwe ya ilekọta gburugburu ebe obibi na imepụta ume ọhụrụ, itinye ego na mmanụ ọkụ ọhụrụ ma ọ bụ ibelata mmetọ, na -agba ume imegharị ihe na ndị ọzọ.
Banyere usoro agụmakwụkwọ, nwere otu n'ime usoro agụmakwụkwọ kacha mma n'ụwa na ụkpụrụ ọrụ nke sitere n'oge gara aga ma ọ dị ka ọ chọghị ịtọghe. Agbanyeghị, ebe a a na-arụ ọrụ nkezi awa 35-40 kwa izu na ọnụ ọgụgụ ndị a so n'ime ndị kacha ala na Europe na -enweghị arụpụtaghị ihe. Na nke ahụ bụ n'etiti obodo na -ewekwu ezumike.
Anyị amatalarị ihe ha na -amasị anyanwụ na ka ha si achọ, dịka ọmụmaatụ, osimiri Spain. Ịga mba ọzọ dị ha mkpa ruo na data na -egosi na ndị Germany na -eme njem mba ofesi karịa kwa n'isi karịa ndị Europe ndị ọzọ. Ebee ka ị na-aga? Ọ dị mma, gaa Spain, Italy, Austria ...
Kedu ihe bụ akara omenala si obodo a? Agbanyeghị na ọ bụ obodo nke ndị Kristian mere eme, taa, ọ nwere ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba buru ibu yabụ ọnwa na kpakpando nke Alakụba abụrụla akụkụ nke ihe atụ German. Anyị nwekwara ike ịkpọ ndị mmadụ ihe atụ Marx, Kant, Beethoven ma ọ bụ Goethe, dịka ọmụmaatụ.
Na ihe banyere Omenala nri ndị German? Nke a dabere n'ịkwadebe nri ebe anụe na -ewu ewu ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na nri ọ bụla nke ụbọchị, yana nri nri na patatasnke sausages, nke chiiznke pickles. Ịga nri abalị na -ewu ewu ma taa enwerekwa ụlọ nri nke agbụrụ ndị ọzọ, yabụ nri dị iche iche.
Ndị Germany, amaara ya, dịka ya nke ukwuu Biya ya mere, ọ na -a dụ ya n'èzí na n'ime ụlọ. N'azụ biya na -abịa mmanya, brandi ... mana biya bụ eze nwanyị zuru oke dịka ị marala. Mana enwere omenala ndị German ọzọ anyị nwere ike ikwu maka ya? N'ezie, enwere ndị mbụ ememme okpukpe, ma nke ndị Kristian na nke Protestant, ma ọ bụ nke Alakụba ugbu a, ma ọ bụ nke ọdịnala ndị ọzọ dịka nke ewu ewu oge tii mara dị ka kaffee na kuchen.
N'oge nke Ekike ọdịnala ị ga -akpọ onye ama ama lederhosen, ndị obodo na -eji, nwere njikọ chiri anya na ọdịnala Bavaria ma ọ bụ Tyrolean. N'ihe gbasara ụmụ nwanyị, uwe a na -ahụkarị bụ dirndl, uwe nwere uwe elu na uwe mwụda mara mma nke, doro anya, anaghịzi eji ya eme ihe ọbụla n'ime ime obodo, mana a na -eji ya eme eme biya ma ọ bụ emume ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, ndị a bụ izugbe na n'ezie, ọ bụrụ na ị na -eme njem na Germany niile, ị ga -ahụ mgbanwe, ndị na -emepe emepe, ndị emechiri emechi, obodo mara mma nke ugwu, obodo dị jụụ, na ndịda, ndịda ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ ọtụtụ ememme a ma ama ruo ọtụtụ narị afọ (dịka ọmụmaatụ ngosi ncheta afọ iri atọ), ahịa ndị mara mma na -ere ihe oriri ma ọ bụ obodo mepere emepe n'ezie. A ga -ahọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Omenala nke Germany
Ndụmọdụ maka ịhazi njem njem ụgbọ mmiri
Osimiri kacha mma na Granada